February 9, 2020 - Tameelay
ကိုယ့်အနားက လူတွေကကိုယ့်ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပါ ပြီးတော့ . . .. ဒီဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပဲ ပိုပြီး သန်မာလာခဲ့တာ ။
February 9, 2020 Tameelay 0
အမှောင်ကြောက်တတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လိုပေါ့ အမှောင်ထဲ နေတာ ကြာလာတဲ့အခါ အလိုလို ကျင့်သားရလာရုံပါ မကြောက်တတ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒီကလေးလေးလိုပါပဲ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ ရလာတဲ့အခါ မနာကျင်ရတော့မဟုတ်ဘူး ခဏခဏ နာကျင်ပြီးရင် နာကျင်လာရတဲ့အခါ အရင်တုန်းကလောက် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်လာရုံပါ ပုခုံဖက်ပေါင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကြောင့် ကိုယ့်ကျောကိုကိုယ် ဂရုစိုက်တတ်လာတာပဲရှိတယ် ကျွန်တော် […]
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါ ကိုယ်ခံစားရတာမဟုတိုင်းစကားတစ်ခွန်းကို လွယ်လွယ်လေးမပြောလိုက်ပါနဲ့
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါ ကိုယ်ခံစားရတာမဟုတိုင်းစကားတစ်ခွန်းကို လွယ်လွယ်လေးမပြောလိုက်ပါနဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ကိုယ့်မှာ အစစအရာရာကို ရင်းထားခဲ့တာလေ ဘာမဟုတ်တာလေးကအစ သေလောာက်အောင်နာကျင်နေချင် နေကျင်နေတာလေ စကားလေးတစ်ခွန်းပြောဖို့ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက် မိုးပျံချင်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အထိ ပြောလိုက်လို့ရသလို သေချင်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အထိ ပြောလိုက်လို့လဲ ဖြစ်တယ်လေ ကိုယ်ချင်းစာပါ ဒါမှမဟုတ် စာနာပေးပါ . . […]
ကျွန်မ ပြုံးနေတဲ့အခါတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့ တစ်ထစ်ချကြီး မယူဆလိုက်ပါနဲ့
ကျွန်မ ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူး ကျွန်မဆိုတာမျိုးက ဝမ်းနည်းနေတဲ့အခါလဲ အလှဆုံးတွေ ပြုံးပြတတ်ပါတယ် မရ ရအောင်လဲ ပြုံးတယ်လေ ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်သူများစာနာလေမလဲလို့ ရင်ဖွင့်ရမယ့်အဖော်ကိုရှာလို့လဲ မတွေ့ခဲ့ဘူး ကိုယ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ခံ ကိုယ်ကောင်းရင် ကိုယ်ပဲ စံခဲ့ရတာလေ ။ နားလည်ပေးပါဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုး မသုံးဖြစ်တာတောင် အဝာာ်ကြာခဲ့ပါပြီ ကိုယ့်အနားမှာ […]
သမီးရည္းစား၊လင္မယားေတြၾကား နားလည္မႈလြဲတာမ်ိဳးျဖစ္လာတဲ့အခါ ဒီလိုေျဖရွင္းပါ
February 9, 2020 yoon waddy 0
ခ်စ္သူေတြ၊ လင္မယားေတြဆိုတာက အရင္းနွီးဆံုးလူေတြပါလို႕ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာ သူစိမ္းႏွစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ၾကား နားလည္မႈလြဲတာ၊ အခန္႕မသင့္လို႕ စိတ္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္တာေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလိုစိတ္သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္တာ၊ နားလည္မႈလြဲတာေတြကို မေျဖရွင္းဘဲ ဒီအတိုင္းပဲ ျပီးသြားမွာပါကြာဆိုျပီး ထားထားလိုက္ရင္ ၾကာလာတဲ့အခါ အပ်က္အပ်က္နဲ႕ႏွာေခါင္းေသြးထြက္တဲ့အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခ်စ္သူရည္းစား၊ လင္မယားေတြၾကားျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ နားလည္မႈလြဲတာကို […]
စိတ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းလေးသာထား အလိုလို အဆင့်အတန်းရှိပြီးသားပဲ
အဆင့်အတန်းဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းပြီး ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ကြသလဲ ။ ငွေရှိတဲ့လူတွေက ငွေမရှိတဲ့လူတွေအပေါ် အဆင့်အတန်းမရှိဘူးလို့ ပြောကြတယ် ။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ ငွေနဲ့ တိုင်းတာတာလား ငွေရှိနေရုံတစ်ခုတည်းနဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်သွားရောလား အဆင့်အတန်းဆိုတာ ပညာတတ်ရုံ ငွေရှိရုံနဲ့ ရှိသွားတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်များများ အဆင့်မရှိတဲ့လူက အဆင့်မရှိတာပဲ ငွေပဲရှိလာတာလေ အဆင့်ရှိအောင်နေတတ်လာတာမှ မဟုတ်တာ […]
ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ အပြစ်မမြင်သလို အပြစ်လဲ မတင်ပါဘူး ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံလို့သာ မှတ်ပါတယ်
ကိုယ်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေထဲမှာ ကိုယ်ညံ့ခဲ့တာတွေလဲ အများကြီးပါခဲ့ပါတယ် ။ ဥပမာ – လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အယုံလွယ်တတ်တာမျိုး ပြီးတော့ အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တာမျိုးပေါ့ ။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်မှာ ဇွတ်ပြီး ခင်လိုက်တာပဲ အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းမပြောပြပဲ ပြန်မတူးဖော်ပဲ လက်ရှိကို ကြည့်ပြီးပဲပေါင်းတယ် အိတ်ကပ်ဖောင်းတာမဖောင်းတာတွေ ဂရုမစိုက်ဘူး စိတ်ဓာတ်ကောင်းတာ […]
ကိုယ်သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့လူကို သိပ်မုန်းသွားမှာထက်စာရင် ဒီတိုင်းလေး ဝေးသွားတာက ပိုကောင်းပါတယ်
ပေါင်းဖက်ကြတယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းချစ်လို့ချည်းမဟုတ်သလို ကျောခိုင်းသွားတယ်ဆိုတိုင်း မုန်းသွားလို့ မဟုတ်ပါဘူး အေးစက်သွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ပြီးနွေးထွေးလာအောင် မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ယုံကြည်သွားခဲ့မိလို့ပါ တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ကြိုးစားခဲ့သလို ပေးနိုင်တာတွေထက်လဲ ပိုပေးခဲ့တာပဲလေ မထိုက်တန်လို့ ရမလာခဲ့တာပဲနေမှာဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချစ်လိုက်ဖို့ ဘယ်လောက် နာကျင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ နည်းနည်းလေးများ ရိပ်မိခဲ့ဖူးလား ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ ဆက်ပြီးဆွဲထားဖို့လဲ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ် နောက်ဆုံးလှည့်မထွက်ခင်အထိ […]
ဘယ်လောက်ပဲ ရင့်ကျက်ပါတယ်ပြောပြော လောကဓံရဲ့ ထိုးချက်တွေအောက်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြိုလဲကျချင်လာတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ဝေဒနာတွေကိုမေ့ပြီး သူတစ်ပါးရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးထည့်ပေးခဲ့ဖူးတယ် ။ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါဆိုတာတော့ ရေရေရာရာ မသိတော့ဘူး ခဏခဏ မှန်းတော့ သိပါတယ် အားငယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကို အထီးကျန်မှုတွေကြားက အားပေးခဲ့ဖူးတယ် ငိုချင်လိုက်တာလို့ ပြောတဲ့သူကို မျက်ရည်တွေကြားက နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ဖူးတယ် ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မျှော်လင့်တောင့်တနေတတ်တဲ့ အရာတွေချည်းပါပဲ […]
တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေရရှိသွားနိုင်မည့် နေနည်းများ
တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေရရှိသွားနိုင်မည့် နေနည်းများ ၁။ နိုးနိုးချင်း…. မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်းနိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲဝင်လေ ထွက်လေလေးကိုသတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာကုဋေတစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့သည့်အတွက်မင်္ဂလာတရားဖြင့်စတင်သည့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဟူသမျှ…. အိမ်သာသွားရာ၊ သွားတိုက်ရာ၊ မျက်နှာသစ်ရာတစ်မိနစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ၊ […]
ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စား အကုသိုလ်ဝယ်သူများ စိတ်ဆိုတာ သီးသန့်လေးရပ်တည်နိုင်လေ ကောင်းလေလေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ချို့မှာကျတော့ အလိုလောဘ၊ သို့မဟုတ် အလိုရမ္မက်ကြီးကြပါတယ်။ အလိုကြီးတဲ့အတွက် အမျက်လည်းထွက်လွယ်လာပါတယ်။ လိုချင်တာလျှော့နိုင်ရင် ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ သီးသန့်လေးရပ်တည်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လွှမ်းမိုးဖို့မကြိုးစားသလို၊ ပတ်သက်ဖို့လည်းမကြိုးစားပါဘူး။ စိတ်မယဉ်ကျေးတဲ့သူနဲ့ ပတ်သက်ရတာ အန္တရာယ်အရမ်းများပါတယ်။ မပေါင်းရင် ရန်ငြိမ်းပါလိမ့်မယ်။ စေတနာမမှန်ပါဘူး။ […]